दौंतरी २ बर्ष पुग्दै
फोहोरी खेल !
आउने अक्टोबर ८ बिहीबार दौंतरी २ बर्ष पुग्दैछ। दौंतरीको फेसबुकमा दौंतरी जन्मदिनको थुप्रै शुभकामना प्राप्त भइरहेकाछन। यसै अबसरमा समस्त लेखक पाठक समक्ष २ बर्षसम्म संगै यात्रा गर्नुभएकोमा धन्यबाद ज्ञापन गर्दै बर्षो बर्ष अझ थप पठनयोग्य सामग्रि टक्राउंदै तपाइहरु समक्ष उपस्थितहुने बाचा गर्दछौं।
यही समय पारेर तपाइहरु पनि शुभकामना,आशा,निराशा आदी दौंतरी समक्ष बाढ्नुहोला।
Posted by: Dautari Admin Labels: दौँतरी खबर
दौँतरी सदा दौँतरी भएर अघि बढ्न सकोस्, हार्दिक शुभकामना एवम् बधाइ छ !
जन्मदिनको हार्दिकक मंगलमय शुभकामना!
धेरै धेरै शुभकामना । Keep up the good work.
दौँतरीमा रहेर यस्तै खुसी मिलिरहोस् । अझै धेरै गर्नु छ, कतिपय बाटो स्पस्ट छैनन्, कतिपय स्पस्ट हुँदैछन्, मिलेर सबैको लागि सबैले गरौँ ।
जन्मदिनको शुभ कामना दौँतरी ! साथै सह यात्री मनहरूलाई पनि हार्दिक बधाई यति लामो यात्रामा साथ र भरथेगका लागि ।
दौतरी सधैंको लागि र सबैको लागि दौतरी रहेर अबिरल यात्रा गरिरहोस शुभकामना!!!
सबै दौँतरी साथीहरु र सम्पूर्ण पाठक तथा मार्गदर्शक साथीहरुमा हार्दिक शुभकामना !
October 7, 2009 at 10:40 PM
Many many Congratulation. Lets celebrate!!
सपनासंसार डट कम said...
दौतरीको दोश्रो बार्षिकी को शुभ उपलक्क्ष मा दौतरी चौतारीकै अर्को दौतरी, सपनासंसार, शुभकामना का गुच्छा हरु टक्रायउदछ । आगामी दिनहरुमा दौतरी चौतारी अझ ससक्त रुपमा समस्त सुचना संचार र साहित्य जगत को आगनी बन्न सफल रहोस। दौतरी चौतारीमा ईट्टा हाल्न को लागी हाम्रो सहयोग सदा जारि रहने छ।
सपनासंसार डट कम
Anukul Prakash said...
हार्दिक शुभकामना एवम् बधाइ छ !
म चै केहि कठिनाइको कारण अलि ढिलो भए। मेरो तर्फ बाट पनि संपूर्ण दौतरी मित्र अनि दौतरी ब्लगलाई उत्तरोतर प्रगतिको कामना सहित बधाइ छ !!
दौतारीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना!!!
शुभकामना बाढ्ने सबै दौंतरीहरुलाइ धन्यबाद। यसरी नै हामी आउने बर्षहरुमा झन उत्क्रिष्ट ब्लगिंग गर्दै जाऔं।
दौतरी समुहले दुई बर्ष पुरा गरेकोमा हादिक मंगलमय शुभकामना।। यो समुहले अझै राम्रा र पठनिय समाचार प्रशरण गरोस यही छ हाम्रो मनकामना।।।।।।।
Milan Rawal Mumbai India